Igama lokuqala Fevertree
Udidi: Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Fevertree.
Thenga iFevertree ukuxuba kwipotifoliyo yakho yokuvula kwakhona
8 April 2021 | Ukuhlaziywa: 8 April 2021
I-Fevertree (FEVR), inkampani yokuxuba imimoya kunye neziselo eyayisakuba sisithandwa semarike yaseLondon, inokuba yindawo efanelekileyo yokuvula kwakhona.
Oku kunokubangela ukuba abanye bacinge ukuba iFevertree iye yafunyanwa njengendawo yokuhlala ekhaya.
Nangona kunjalo, enye yeziphumo ebezingalindelekanga zokuba sonke sisekhaya kube ngakumbi kukwanda kohambo oluya kwilayisensi engekho mthethweni okanye kwivenkile yokuthenga utywala (kunye nabaxube) bokuselwa ekhaya. Inokuba sesinye sezizathu zokuba ngoJuni wonyaka ophelileyo amaxabiso ezabelo zeFevertree wayesele ebuyele kumanqanaba angaphambi kobhubhane, nangona ibisekhona indlela ephezulu ye-3956p ebhalwe ngoSeptemba 2018.
Ngokuqinisekileyo ixabiso lesitokhwe liphulukene nomthamo wokufika emva kwexesha, lithe lancipha unyaka ukuza kuthi ga ngoku, nangona oko kunokutolikwa njengokudityaniswa okubanzi kokudityaniswa okubanzi, okwenza ukuba kulungiselelwe kakuhle ukuqhekeka. Sikwicala lokujonga okugqibela.
Ixabiso lentengoFevertree kwintengiselwano yebhanki Fevertree, Inc.
Ixabiso lesabelo liphuma ngaphezulu kwe-20% ukusukela oko kuqala unyaka, kodwa bekusathengwa ibhidi emva kwexesha kwaye okwangoku urhwebo ngo 2274p.
Iintsingiselo yegama lokuqala, imvelaphi, ukuhambelana kwegama kunye neneniso Fevertree
Urhwebo lwangaphandle lukhula ngamandla e-US, UK naseYurophu
Ke sisiphi isiseko kula manani aqikelelweyo aqinisekileyo? Emva kokuba yonke ingeniso yesabelo ngasinye ibuyile ukusuka kwi-50.3p ngo-2019 ukuya kwi-35.8p ngo-2020, nangona kulindeleke ukuba iphucule nge-15% kulo nyaka uzayo.
Ewe, konke malunga nesiqingatha sesibini sonyaka kunye nokunyuka kwenkcitho yabathengi kulindeleke njengoko uqoqosho luvula. Kodwa utshintsho olubonwe kwixesha lokuhlala-ekhaya luye lwafaka utshintsho olusisigxina kwimikhwa yokusela, ngenxa yesiphepho esipheleleyo seenzuzo zeFevertree.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, abathengi bagcina ngaphandle kwee-pubs, iikofu kunye neeresityu zajika zaya kurhwebo. I-Fevertree, ngenxa yoko, ibone "ukukhula okumangalisayo" kwi-UK yokungena kunye nokuthengisa kwi-Europe kurhwebo, ngokutsho kwengxelo yayo yokuphela konyaka eyakhutshwa nge-18 kaMatshi. Ukurhweba ngaphandle kubhekisa kwintengiso kwiivenkile ezinkulu nakwezinye iivenkile zokutya, ngelixa urhwebo luyi-pubs, iivenkile zokutyela nezinye.
Ukuthatha imeko, iFevertree iqhubile nokwazisa-njenge-gin kunye nemiboniso yeetoni kwintengiso neBombay Sapphire eJamani kunye nokusebenzisana kweVodka Soda kunye neSmirnoff e-UK.
Umfundi wase-UK usenokuba uqaphela intengiso yeTV evela eFevertree, iphulo lokuqala lesizwe e-UK kwinkampani.
Inkampani yokuxuba imimoya ikwakhuphe amaphepha anophawu kwiiwebhusayithi zabathengisi e-UK nakwiimarike zonke ezibalulekileyo zase-US, ethe loo nkampani yabonisa amathuba okukhula ngobuchule.
Kwelo nqaku kuye kwa-inki i-akhawunti yelizwe yokuphumelela nge-MGM kunye ne-Sparkling Pink Grapefruit e-US.
I-Fevertree ikwasungule uluhlu lweprimiyamu yesoda entsha njengoko iqhubeka ukugxila ekutsaleni abathengi abaninzi.
Apho abantu basela khona butshintshile ngenxa yobhubhane, kodwa utyekelo olunzulu lubonwe kubungqina ngaphambi kokuvela kukaCovid, lubone ukukhula kwento echazwa nguFevertree njengencasa “yeziselo ezinde ezixubileyo” - abathengi abaninzi bakhetha ukusela imimoya kwaye ke ngesixa esikhulu somxube.
Oku kunokuba kulandelwe kwizithende zabaxube abancinci beebhotile-ezinje ngeSmirnoff Ice brand - eza kwintengiso malunga neminyaka eli-10 eyadlulayo, enokuthi mhlawumbi incede ukutshintsha ukuthanda.
Inyaniso yokuba le meko "iyaqhubeka nokuvakala kubathengi" ngumculo ezindlebeni zeFevertree kwaye kufanele ukuba ibakholise nabanini zabelo.
Kwaye kuloo mxube, ngokuthetha, imimoya iyaqhubeka nokuthatha isabelo kwibhiya newayini.
Kwakhona, imimoya yeprimiyamu ibona ukukhula okunamandla, njengoko abathengi bejonge ukuzinyanga. Nangona kukho ukhuphiswano olukhulayo olujamelene neFevertree, isayalela i-50% yentengiso, kunye nejografi zayo ezinamandla e-UK, eJamani, e-Australia nase-US.
Igama lokuqala Fevertree lithetha ntoni?
Ukubonakaliswa kwamandla enkampani kunye nesicwangciso sayo sokukhula ngempumelelo, iFevertree yongeze i-35 kwi-headcount kwisahlulo sayo sehlabathi kwaye akunyanzelekanga ukuba yenze imali kurhulumente wase-UK xa athengisa nge-lockdowns.
Nangona, njengoko sele sibonile, inzuzo kunye nengeniso yehla kunyaka ophelileyo, inkampani ibisakwazi ukunyusa intlawulo yesahlulo nge-4%, ibonisa unyaka wesithandathu wokukhula ngokulandelelana. Ihlawulwe kabini ngonyaka, isahlulo sekota yesine yayili-10.27pa kwaye ekupheleni kukaJuni 2020 5.41p.
Inkampani iqikelela ukukhula kwe-FY 2021 ye-18-21% e-US, apho urhwebo lwangaphandle lweakhawunti ye-90% yeshishini kunye nokukhula kwe-6-9% e-UK apho urhwebo lwangaphandle ngoku lilingana ne-75% yeshishini lalo.
IYurophu kulindeleke ukuba ikhule ngamandla phakathi kwe-18% ukuya kuma-20%, kunye noMmandla woBume beHlabathi, obandakanya iimarike zaseAustralia nezaseCanada ezomeleleyo, kuqikelelwa ukuba ziya kudumba ukuya kuma kuma-24%.
Igama lokuqala Fevertree lithetha ntoni? kubathengisi yothotho olulungeleleneyo olugobileyo, olungenasiphelo esincinci apha kunye nembonakalo yomngcipheko ekufuneka ibone isitokhwe siphinda sibuyele kubuqaqawuli baso besiya ekuvulweni kwakhona kwezoqoqosho lwase-UK nase-US, kwaye iYurophu iza kulandela.
Njengokuba ujikelezo oluphuma kwizitokhwe zobuchwephesha ezixabisa kakhulu eziqhubeka, iinkampani zabathengi ezinje ngeFevertree zimiselwe ukuba zibe phakathi kwabaphumeleleyo njengoko sisiya kwisiqingatha sesibini sonyaka.
Ungayithenga iFevertree kwi-0% yekhomishini ngeqonga lotyalo-mali le-eToro.
tags discretionary yabathengi, Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Fevertree., ukutya kunye neziselo esitokisini, Ukuvula isitokhwe kwakhona